တရုတ်တွင် ၉ နှစ်သမီးနဲ့ ကလေးမွေး… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » တရုတ်တွင် ၉ နှစ်သမီးနဲ့ ကလေးမွေး…
တရုတ်တွင် ၉ နှစ်သမီးနဲ့ ကလေးမွေး…
Posted by lu ta lone on May 26, 2010 in News, Other - Non Channelized, Photography, World News | 23 comments
တရုတ်တွင် ၉ နှစ်သမီးနဲ့ ကလေးမွေး... လူတလုံး အာဘော်...
တရုတ်ပြည် အရှေ့မြောက်ပိုင်းက ၉ နှစ်အရွယ် ကလေးမှ ကလေးမွေးဖွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်… ဂျိလင်ပြည်နယ် ချန်ချွန်းက ဆေးရုံတခုမှာ မွေးဖွားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်… ကလေးရော မိခင်ပါ ကျန်းကျန်းမာမာရှိပြီး ကလေးမှာ ၂.၇၅ ကီလိုဂရမ်ရှိပါတယ်… အဆိုပါ ဖြစ်ရပ်မျိုးမှာ အိန်ဒိယ နှင့် တရုတ်ပြည် Wikipedia မှာ တခါမှ မရှိဖူးသေးသော ဖြစ်ရပ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်… ၉ နှစ်အောက်နဲ့ မိခင်ဖြစ်သွားသော ဖြစ်ရပ်များမှာ ၂ ခု နှင့် ၉ နှစ်နဲ့ မိခင်ဖြစ်သွားသော ဖြစ်ရပ်မှာ ၅ခု သာ ကမ်ဘာမှာရှိပါသေးတယ်… ၁၉၃၉ ခုနှစ်က ပီရူးမှာ ၅ နှစ်သမီးနဲ့ တခါ၊ ၂၀၀၆ ခုနှစ်မှာ ၈ နှစ်သမီးနဲ့ အဲဒီ ပီရူးမှာပဲ နောက်တခါဟာ ၉ နှစ်အောက်နဲ့ ကလေးမွေးဖွားခဲ့သော ဖြစ်ရပ်ဖြစ်ပြီး… ၉ နှစ်နဲ့ ကလေးမွေးဖွားသော ဖြစ်ရပ်မှာ ၅ ခု၊ ၁၀ နှစ်နဲ့ မွေးဖွားသော ဖြစ်ရပ်မှာ ၉ ခု နှင့် ၁၁ နှစ်နဲ့ ကလေးမွေးဖွားသော ဖြစ်ရပ်မှာ ၈ ခု ရှိပါသေးတယ်..
ခေတ်ကြီးတိုးတက်လာတာဗျ…..IT နဲ့လည်း ဆိုင်ချင်ဆိုင်မှာပေါ့………..
Remind me of King KaThaLa’s 16 point dream.
အခုခေတ်က မိန်းကလေးတွေ အပျိုဖြစ်တာစောလာကြပြီလေ။ မြန်မာပြည်မှာလဲ ၉ နှစ်လောက်နဲ့ အပျိုဖြစ်တာတွေ ရှိလာပြီ။ ငယ်သေးတယ်ဆိုပြီး လွှတ်ထားလို့မရတော့ဘူး။ မတော်လို့ လူယုတ်မာတွေနဲ့တွေ့သွားရင် အဲဒီလိုဗိုက်ထွက်လာမှာပဲ။
9 နှစ်နဲ့ :-O
အဲဒီအရွယ်နဲ့ ကလေးမွေးလို့ရပါ့မလား? မဖြစ်နိုင်ဘူးထင်ပါတယ်။
ဖြစ်နိုင်ပါ့မလား ကလေးပုံလေးပဲတင်ထားတာပဲ … ဆေးပညာအရကြည့်ရမယ်ဆို မဖြစ်နိုင်လောက်တဲ့အဖြစ်မျိုးပဲ ….
OMG!!! 9-year-old girl gave birthababy???? the world supposed to be turning backward….. i can’t believe it ………
ငယ်ငယ်ကကြားဖူးတဲ့ လူ့သက်တမ်းတွေ တိုလာပြီဆိုတာ.. တကယ်ပဲ ဖြစ်လာပြီလား…
Phyo Myint Kyaw says:
ဟုတ်တယ်..ဟုတ်တယ်… ဒီဆောင်းပါးဖတ်ရတာ သံဝေဂရစရာပဲ… လူ့သက်တမ်းတိုလာတော့မယ်ဆိုတာကို သက်သေပြနေတာဗျို့…
အခု ဆုတ်ကပ်ထဲရောက်နေကြပြီလေ…. ဆုတ်ကပ်က ၁၀ နှစ်သက်တမ်းထိ ဆုတ်မယ်ဆိုတော့.. အဲဒီ့ခေတ်ရောက်ရင် ၅ နှစ်လောက်နဲ့ ကလေးမွေးမယ်လို့
ဒါကြောင့်ပြောတာ လူလုပ်လို့ လူဖြစ်လာတာ ဖြစ်တောင့်ဖြစ်ခဲ့ပေါ့လေ…
ခု မြန်မာပြည်မှာတောင် ၃တန်း ၄တန်း အရွယ်တွေ ရည်းစားထားကြလို့ ကျောင်းပြောင်းရွှေ့ရတာတွေတောင်ဖြစ်တယ်ဆိုပဲ။
ဟုတ်ရောဟုတ်လို့လား ဒီအရွယ်လေးနဲ့မွေးလို့ရတယ်ဆိုတော့ ။ ဒီအရွယ်လေးနဲ့ မွေးလို့ရတယ်ဆိုရင်တောင် ဒါဘယ်သူ့လက်ချက်လဲ ။ ဘယ်နွားအိုက မြက်နုကြိုက်တာတုန်း ။
သတင်းက ပြည့်စုံအောင် မရေးပေးထားသလိုဘဲ ဒီသတင်းကို တရုတ်လို ဖတ်ပြီးတာကြာပါပြီ. ကိုယ်ဝန်ကဘယ်နွားအိုရဲ့ လက်ချက်မှမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီ၉နှစ်သမီးကို သူ့မိခင်ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေတဲ့ အချိန်မှာ ဒီကလေးရဲ့သားအိမ်ထဲကို သူ့မိခင်ရဲ့နောက်ထပ်မျိုးဥက ကလေးအချင်းကနေ တဆင့်ဝင်ရောက်သွားလို့ပါ။ ဒါကဆရာဝန်တွေရဲ့ လေ့လာတွေ့ရှိချက်ပါ။
ဟုတ်ပါ့မလား ကလေးပုံပဲတင်ထားပြီး မွေးတဲ့၉နှစ်အ၇ွယ်ကောင်မလေးပုံတော့မတင်ထားပဲနဲ့ဘယ်လိုယုံ၇မှာလဲ ဖြစ်လည်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူး ယုံ၇ခတ်ခတ်ပါပဲ
ဟိုတခါကတော့ ၁နှစ်ခွဲနဲ့ ဗိုက်ထဲကလေး တယောက်ရှိတယ်ဆိုတာ ကြားမိတယ် မေးထဲရောက်လာလို့ အခုကော ဘယ်လိုကြီးလဲ ၁နှစ်ခွဲကတော့ ဆရာဝန်တွေ ကောက်ချက်ချတာ အရင်မိခင်ဆီကနေ တဆင့်ပါလာတယ်ဆိုတာ ထားပါတော့လေ။ အခုဟာက လူမဖြစ်တဖြစ်လေးဘဲ ရှိသေးတယ် ကလေးမွေးတဲ့ ကလေးလည်း တော်တော်ခံရမှာဘဲနော် သနားပါတယ်
ဟဲ ငတုံတွေ ၉နှစ်ကလေးက မွေးပေးဒါ………………….။